Farmaajo oo wali ka aamusan baaqa mucaaradka | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo wali ka aamusan baaqa mucaaradka
Doodda ka taagan Guddiyada doorashada ayeesan Dowladda Madaxweyne Farmaajo wali ka jawaabin, taasoo dalka u hageysa buuq & is qab-qabsi siyaasaddeed.
Weli waxaa jira dood ka taagan Guddiyada doorashooyinka Soomaaliya oo ay soo Magacaabeen dowladda Soomaaliya & Madaxweynayaasha Saddexda Dowlad goboleed ee Hir-Shabeelle, Galmudug & Koonfur Galbeed, kuwaas oo ay qaadaceen Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya iyo Xubnaha mucaaradka.
Qoraalo is-xig xigay oo ay soo saareen, Guddoomiyaha Aqalka sare, Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya iyo Xubnaha mucaaradka ayaa waxaa ay ku sheegeen in guddiyada doorashooyinka Heer Federaal & Heer Dowlad Goboleed laga soo xulay Hay'adda Nabadsugida Soomaaliya iyo Shaqaalaha dowladda Soomaaliya.
Xukuumadda Soomaaliya oo laga sugayay jawaabta ku saabsan Guddiyada ay qaadaceen musharixiinta Madaxweynaha & Xubnaha mucaaradka ayaan si cad ugu jawaabin marka laga reebo Ra'iisul wasaare kuxigeenka Soomaaliya oo saameyn ballaaran ku leh dowladda Madaxweyne Farmaajo oo dhowr jeer shaaciyay hadalo lagu duraayay Siyaasiyiinta mucaaradka.
Qaar kamid ah musharixiinta Madaxweynaha ayaa muujiyay shaki ay ka qabaan Guddiyada oo ay sheegeen inaan lagu kalsoonaan karin, waxaana hadalkaasi xoojiyay Mahdi Guuleed Ra'iisul wasaare kuxigeenka Soomaaliya oo goob fagaaro ah ka sheegay in doorashada 2021 wareega 1aad lagu kala bixi doono, sida doorashayooyinkii Galmudug, Hir-Shabeelle & Koonfur Galbeed oo ay kusoo baxeen Madaxweynayaal taageersan Villa Soomaaliya.
Dowladda uu hoggaamiye ayaa dalka u hageysa buuq & is qab-qabsi siyaasaddeed hadii ay sidaan kusoo wado oo aysan ka jawaabin baaqa mucaaradka.
Hadaba, Madaxweyne Farmaajo ayaa qaadanaya istraatijiyadda Fahad Yaasiin oo ah 'Ka aamus, oo ha isku buuqaane'.